Dhammaan waxyaalaha waaweyn waxay leeyihiin bilow yar. - Peter Senge - xigasho Pedia
Dhammaan waxyaalaha waaweyn waxay leeyihiin bilow yar. - Peter Senge
Markii aan koreynay, dhammaanteen waxaan haysannaa himilo kala duwan oo nolosha ah. Waxay ku bilaabataa dhiirrigelinta kala duwan ee aan ku aragno hareeraheena iyo khibradaha kala duwan ee aan haysanno inta ay noloshu sii socoto. Si aan u gaarno himiladeenna, waxaan had iyo jeer u fikirnaa inaan u baahan nahay ilo badan oo aan haysanin.
Waxaan sidoo kale mararka qaarkood, shaki gelinnaa iska-fikirkayaga nafteena ah oo aan ku filnayn. Marxaladan, waa inaan joojino oo aan ka fikirnaa. Waa muhiim inaad naftaada aaminto. Waa inaanu abaalmarinaa nafteena, xitaa guulo yar oo sidoo kale ah.
Waa inaan geesinimada uga qaadnaa guulo yar oo aan kalsooni ku dhisnaa. Khibradaha kaladuwan waxay ina tusayaan xaglo kala duwan oo nolosha ah. Waxay na baraysaa casharo kaladuwan oo naga caawiya kobaca. Sidaa darteed, waa inaan qirno waxyaabaha yar yar oo aan ku dul dhisanno. Waxay gacan ka geysaneysaa xaqiijinta hamiga aan dhammaanteen wada leennahay.
Mararka qaarkood, waxaan sidoo kale dareemaynaa in tabarucadeenna aan u keenno sabab weyn micno malahan. Laakiin waa inaan ogaano in tallaabo kasta oo yar ay muhiim tahay. Waxaan u dhaqmaynaa sidii raad raadinta kuwa kale oo iyagana sidoo kale gacan ka geysan kara. Saamaynta silsiladani wax weyn ayey ka dhigeysaa waxayna leedahay saameyn muhiim ah sidoo kale.
Sidaa daraadeed, waa inaan aamino awoodaheena oo aan marnaba ka waantoobin bilaabida wax loo qabtay ulajeedooyin wanaagsan. Xitaa haddii aan halganno oo aannan arki karin nalka dhammaadka tunnel-ka, waa inaan ku sii jirnaa dhamaadka.
Waxa aan caqligal ku samayn karin waqtiga xaadirka ah, ayaa macno samayn doonta hadhow sida aan u xasuusano xusuusta wacan dhammaystirka riyooyinkeenna dambe.
Xigashooyinka Weyn ee loogu talagalay Carruurta
Fikrado Weyn Oo Ku Saabsan Guusha
Quotes Shaqooyinka Weyn
Xigashooyinka ugu waaweyn
Xigashooyinka bilowga cusub
Xigashooyinka ku saabsan bilawga cusub
Xigashooyinka ku saabsan Bilaabashada Cusub iyo Isbeddelka
Fikradaha Yar ee Maalinta